AutoPitch: Automation mailaka ho an'ny solontenan'ny fampandrosoana ny varotra | Martech Zone
Alakamisy, Aprily 12, 2018 Alahady 15 aprily 2018 Douglas Karr
Betsaka ny fotoana anaovan'ny solontenan'ny mpivarotra lisitra tsara, saingy ny ezaka ilaina handefasana mailaka iray isaky ny mandeha dia mitaky ezaka be loatra. Tafiditra mivantana amin'ny mailakao ny AutoPitch, manome alalana ny templating, ary avy eo dia mitatitra izay hetsika na fandraisana andraikitra mahakasika ireo mailaka ireo Azonao atao mihitsy aza ny mametraka ny filaharana milahatra any amin'ny lisitrao.
Ny fisintomana lisitra firaka mangatsiaka ao anaty sehatra mailaka dia mety hahatonga orinasa iray amin'ny olana kely amin'ny mpamatsy azy ireo. AutoPitch dia mamela anao hifandray sy handefa mailaka anao manokana amin'ny alàlan'ny kaontin'ny birao.
Fitantanana fitarihana - Jereo ny rakitsoratra mifandraika amin'ny antsipiriany, ary jereo ny tantaran'ny fifandraisana amin'ny toerana iray hahafahanao mitantana fitarihana tsy misy olana.
Mail Merge - Ny endri-javatra fampifangaroana mailaka dia ahitana ny fanarahan-dia misokatra, ny fanarahana ny tsindry, ny fanaingoana ny fampifangaroana ny mailaka, ny fandaharam-potoana ary ny maro hafa.
Templates - Modely mailaka nozaraina, ho an'ny ekipa iray manontolo. Tsy mila mifamadika avy amin'ny fampiharana iray mankany amin'ny iray hafa. Ny zavatra rehetra amin'ny toerana iray!
Fanaraha-maso Auto - Ampitomboy ny mailanao amin'ny mailaka fanaraha-maso mandeha ho azy. Mamboly fitarihana bebe kokoa ary ampitomboina ny fahombiazany.
Lisitry ny famerana - Manampia domains sy mailaka amin'ny lisitra famoretana, hisorohana ny fanitsakitsahana CAN-SPAM.
asa - Mamorona, mandamina ary manome andraikitra fa aza adino ny fanarahana azy.
Azonao atao ihany koa ny miasa AutoPitch ho an'ny ekipa iray manontolo amin'ny kaonty tokana. Miara-miasa amin'ny Google Apps (Gmail), Microsoft Exchange, Office 365, na mpamatsy mailaka miorina amin'ny SMTP i AutoPitch.
Midira ho an'ny AutoPitch
Tags: autopitchautomation emailG SuiteGmailtaratrafmbirao 365toe-tsainalisitry ny lahasa fivarotanamailaka nisesySMTPlisitry ny famoretana